ब्ल्याकज्याक Black Blackjack-online.app बाट प्रविष्ट गर्नुहोस् र रमाउनुहोस्
ब्ल्याकज्याक एउटा खेल हो जुन क्यासिनोमा कार्डहरूसँग खेल्दछ र to२ कार्डको १ देखि dec डेकसँग खेल्न सकिन्छ, जहाँ उद्देश्य विपक्षी भन्दा बढी पोइन्टहरू राख्नु हो, तर २१ भन्दा माथिको बिना (यदि तपाइँ हार्नुहुन्छ)। डिलरले अधिकतम cards कार्ड वा १ to सम्ममा मात्र हिट गर्न सक्दछ।
ब्ल्याकज्याक: कसरी चरणबद्ध चरण खेल्ने? 🙂
नि: शुल्क नि: शुल्क ब्ल्याकजेक खेल्नको लागि, तपाईंसँग गर्नुपर्दछ यी निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्:
1 चरण। तपाईंको मनपर्ने ब्राउजर खोल्नुहोस् र खेल वेबसाइटमा जानुहोस् Emulator.online।
2 चरण। वेबसाइटमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै, खेल पहिले नै स्क्रिनमा प्रदर्शन हुनेछ। तपाईं मात्र गर्न छ हिट खेल र तपाइँ खेल सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
4 चरण। २१ जति सक्दो नजिक जानुहोस्।
कालोज्याक भनेको के हो?????
ब्ल्याकज्याक संसारमा सबैभन्दा प्रसिद्ध कार्ड खेलहरू मध्ये एक हो। खेल छ सरल, सहज र कोही पनि यसलाई खेल्न सक्छन्। ब्ल्याकज्याक १ देखि from सम्मका डेकहरूको साथ खेल्न सकिन्छ, प्रत्येक 1२ कार्डहरू सहित। थप रूपमा, त्यहाँ ब्ल्याकज्याक अनलाइन खेल्ने विकल्प छ।
खेलको उद्देश्य सरल छ: २१ अ exceed्कभन्दा बढी बिना, सकेसम्म उच्चतम स्कोर प्राप्त गर्नुहोस्। यो लक्ष्य प्राप्त गर्न, खेलाडीले सुरुमा दुई कार्ड प्राप्त गर्दछ, तर खेलको बखत अधिक अनुरोध गर्न सक्दछ।
उच्चतम सम्भावित स्कोरलाई ब्ल्याकज्याक भनिन्छ, किन यो खेलको यो विचित्र नाम छ।
हामीलाई थाहा छ कि ब्ल्याकजेक १th औं शताब्दीका बिभिन्न खेलहरूबाट विकसित भएको छ जुन युरोपमा खेलाइएको थियो। धेरै जसो यी खेलहरूमा एक चीज समान थियो। गोल २१ मा पुग्नु थियो।
यी खेलहरूमा पहिलो संदर्भ बनेको थियो १1601०१ र मिगुएल डे सर्भेन्टेस, रिन्कोनेट वाई कोर्टडाइलोको काममा उपस्थित छ। यस उपन्यासले दुई सेभिलियन बदमाशहरूको जीवन र शोकको बयान गर्दछ जुन सुनौलो युगका थिए, जो "भेन्टियानो" भन्ने खेल खेल्नमा एकदमै सिपालु छन्।
फ्रान्सेली संस्करण खेल २१ थोरै फरक छ, किनकि डिलरले द्विपना र दुबै खेलाडीहरू प्रत्येक राउन्ड पछाडि शर्त गर्न सक्छन्।
बारीमा, इटालियन संस्करणसात र एक आधा नामले जान्छ, सहमत छ कि खेल अनुहार कार्डको साथ साथै संख्या 7, and र with संग पनि खेल्न सकिन्छ। खेल इटालियन संस्करणमा भिन्न थियो किनकि नामले भनेका रूपमा साढे सात बिन्दुमा पुग्न लागेको थियो। स्पष्ट रूपमा, यदि खेलाडीहरूले साढे सात अंक पार गरे, तिनीहरू हराउँछन्।
A फ्रान्सेली क्रान्ति पछि अमेरिका आयो, र सुरुमा यो जुवा डेन्स मा कि लोकप्रिय थिएन। यस खेललाई खेलाडीहरू आकर्षण गर्न, मालिकहरूले विभिन्न प्रकारका बोनसहरू प्रस्ताव गरे। सबैभन्दा लोकप्रिय विकल्पहरूमा १०-देखि -१ भुक्तानी प्रणाली शामिल थियो, एक हातका लागि कुद्दा र ब्ल्याकजेकको। त्यो हातलाई ब्ल्याकज्याक भनियो, जुन खेललाई यसको नाम दिईयो।
ब्ल्याकज्याक एक खेल हो जुन क्यासिनो आफैंमा धेरै भ्यारीएबलहरू हुन्छन्। यहाँ हामी मुख्य सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिएको विविधता प्रस्तुत गर्दछौं।
यो मूल रूपसँग मिल्दोजुल्दो भिन्नता हो, यो सामान्यसँग खेल्दछ To to कार्डका to देखि dec डेकहरू।
यद्यपि, यहाँ छ कुनै पनि संख्याको कार्डहरू डबल गर्न यो सम्भव छ, जसरी यो इक्सेस हटाए पछि अर्को एउटा कार्डमा हिट गर्न सम्भव छ।
स्प्यानिश २१ मा, खेलाडीको ब्ल्याकज्याकले सँधै डीलरलाई पिट्दछ।
मल्टी ह्यान्ड ब्ल्याकजेक
बहु-हात ब्ल्याकजेक नियमित ब्ल्याकज्याकको जस्तै ठ्याक्कै खेल्दछ र प्राय: अनलाइन क्यासिनोहरूमा देखा पर्दछ यसले खेलाडीलाई अनुमति दिनको लागि। उही खेलको अवधिमा different बिभिन्न हातहरू सम्म।
यो भिन्नता एकै समयमा dec डेकसँग खेल्दछ।
यो संस्करण खेलेको छ Cards२ कार्ड र तपाइँ जहिले पनि तपाइँको खेल 52 वा Ace मा फोल्ड गर्न लगाउन सक्नुहुन्छ। यद्यपि यस संस्करणमा डिलरसँग ब्ल्याकजेक छ भने उसले आफ्नो सम्पूर्ण शर्त गुमाउँछ।
ब्ल्याकज्याक स्विचले तपाईंलाई केहि चालहरू प्रदान गर्दछ जुन सामान्य कार्ड गेममा धोखाको रूपमा वर्गीकृत गरिन्छ।
यद्यपि यो भिन्नता to देखि dec डेकको साथ प्रदर्शन, खेलाडीहरू जहिले पनि दुई फरक हात हुन्छन्, कार्डहरू समेटिन्छन् र खेलाडीहरूले हातहरूको कार्ड आदान प्रदान गर्न सक्दछन्।
लास भेगास स्ट्रिप
भेगास स्ट्रिप ब्ल्याकजेकको अर्को भिन्नता हो र dec डेक 4२ कार्डको साथ खेलाइन्छ। यहाँ बिक्रेता रोक्न बाध्य छ जबसम्म उसको कार्डको योगफल १ 52 छ।
साथै, एक खेलाडीले पहिलो दुई कार्डहरू हटाउन सक्दछ र आफ्ना हातहरू पुनः प्रदर्शन गर्न सक्छ।
अब हामीलाई थाहा छ कि ब्ल्याकजेक के हो र यसको आधारभूत धारणाहरू, तर भू-आधारित वा अनलाइन क्यासिनोमा ब्ल्याकजेक खेल्नु अघि तपाईले सिक्नु पर्छ र मास्टर गर्नुपर्छ। कालोज्याक नियमहरू। यसले तपाइँलाई तपाइँको पहिलो खेल अनुभवको समयमा र अधिक सहज महसुस गर्न को लागी र तपाइँको टेबुल मा सबै खेलाडीहरु को लागी अधिक छिटो प्रकट गर्न को लागी अनुमति दिनेछ।
ब्ल्याकजेक एक रणनीति खेल हो, जुन सामूहिक तालिकामा खेल्दछ जहाँ धेरै प्लेयरहरू खेल्न सक्छन्, तर प्रत्येक एक आफ्नै रणनीतिमा निर्भर गर्दछ र डिलरको बिरूद्ध व्यक्तिगत रूपमा खेल्छ।
प्रत्येक खेलाडीको उद्देश्य २१ बनाउने हो वा उनीहरूको हात सम्भव भएसम्म २१ भन्दा नजिकको प्राप्त गर्नु हो। खेलाडी वा डीलरले ब्ल्याकजेकलाई बनाउँछ जब तिनीहरूको दुई सुरूवात कार्ड Ace र १० (Ace + १० कार्ड, वा Ace प्लस कार्ड) हुन्।
खेल्न सुरू गर्नुहोस् ????
ब्ल्याकजेक यो सामान्यतया dec डेक कार्डको साथ एक साथ खेलाइन्छ जुन प्रत्येक खेलको बिचमा बदलिन्छ।
मा पहिलो राउन्ड खेलाडीहरूसँग सम्झौता गरिएको कार्डहरूको सामना गरिन्छ, डिलरको पहिलो कार्ड बाहेक, जसलाई तल झारिन्छ।
जब दोस्रो खेल्ने कार्ड सम्झौता गरिन्छ, सबै कार्डहरू समेटिन्छन् र यो डिलरको कार्डको मूल्य हो जुन खेलाडीहरूले खेलको बारेमा लिने सबै निर्णयहरूमा प्रभाव पार्दछ।
डीलरको कार्डहरूको मूल्य सँधै हुनुपर्दछ १ 17 भन्दा माथिअर्को शब्दमा, यदि डिलरको पहिलो दुई कार्डको मूल्य १ 17 भन्दा कम छ भने उसले न्यूनतम १ 17 र अधिकतम २१ सम्म नपुग्दासम्म उसले थप कार्ड बनाउनु पर्छ।
यदि डिलर २१ भन्दा बढी बनाउँछ भने, उसले जाँच गर्छ, र सबै खेलाडीहरू जित्छन्। घटनामा कि डिलरले १ and र २१ बीचमा एउटा मान राख्छ, उच्च मूल्यको खेलाडीले खेल्छन्, समान मूल्यका खेलाडीहरू टाई दिन्छन् र डिलरको भन्दा कम मानको साथ खेलाडीहरूले उनीहरूको बेट्स गुमाउँछन्।
ब्ल्याक ज्याकले २ देखि १ भुक्तान गर्दछ, तर यदि एक खेलाडीले ब्ल्याकजेक बनाउँछ भने उसले to देखि २ जित्छ। यदि डिलर ब्ल्याकजेक्स, उसले टेबुलमा सबै हातहरू जित्दछ, २१ को मानको साथ पनि। जब खेलाडी र डिलर ब्ल्याकजेक, यो टाई मानिन्छ र त्यहाँ कुनै भुक्तानी हुँदैन।
सामान्यतया, तपाईले प्रत्येक ब्ल्याकजेक तालिकामा जानकारी पाउनुहुनेछ त्यो तालिकाको लागि न्यूनतम र अधिकतम शर्त सीमाहरू। Si el límite de la mesa indica2€ - 100 €, esto significa que la apuesta mínima es2€ y la apuesta máxima es 100 €.
ब्ल्याकज्याक कार्ड मूल्य
२ देखि १० सम्मका प्रत्येक कार्डको अनुहार मूल्य हुन्छ (कार्ड नम्बर बराबर)।
ज्याक, रानी र राजाहरू (फिगर) १० अंकको लायक छन्।
ऐस १ अंक वा ११ पोइन्टको लायक हुन्छ, खेलाडीको छनौटमा उसको हातमा र उसलाई मूल्यवान छ जुन सबैभन्दा उपयुक्त छ। ब्ल्याकजेक अनलाइन खेल्दा, सफ्टवेयरले एक्काको मान प्लेयरको लागि सबैभन्दा फाइदाजनक ठानेको छ।
यस खेलको भिन्नतालाई बेवास्ता गर्दै, चालहरूको प्रकार तिनीहरू सबैको लागि एक समान हो।
ब्ल्याक जेक मूव्स
त्यहाँ छन् Types प्रकारहरू आन्दोलन को फरक।
खडा (स्टप) नामले स .्केत गरे अनुसार, खेलाडी आफ्नो हातले सन्तुष्ट छ र कुनै थप कार्डहरू प्राप्त गर्न चाहँदैन।
हिट: प्लेयरले अर्को कार्ड प्राप्त गर्न चाहँदा देखा पर्दछ।
डबल: यदि खेलाडीलाई लाग्छ कि उसलाई केवल एउटा अतिरिक्त कार्ड चाहिएको छ (केवल एक), उसले आफ्नो शर्त दोब्बर हुनको लागि सोध्न सक्छ र एउटा थप कार्ड प्राप्त गर्न सक्छ। यो नोट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि यो विकल्प तपाईले प्राप्त गर्नु भएको पहिलो दुई कार्डमा मात्र प्रदान गर्न सकिन्छ।
विभाजित: यदि खेलाडीले प्राप्त गरेका पहिले दुई कार्डहरूको उहि बिन्दु मान छ भने, उसले तिनीहरूलाई दुई फरक हातमा विभाजन गर्न सक्छ। यस अवस्थामा, प्रत्येक कार्ड नयाँ हातको पहिलो कार्ड हुनेछ। यसबाहेक, यो नयाँ हातको लागि नयाँ शर्त (पहिलोमा मानको बराबर) राख्न पनि आवश्यक छ।
हार मान: त्यहाँ केही क्यासिनोहरू छन् जुन पहिलो दुई कार्डहरू प्राप्त गरिसकेपछि खेलाडीले फोल्ड गर्न अनुमति दिन्छ। जे होस्, यस मामिलामा तपाईले जहिले पनि सुरूमा शर्त लगाउनु भएको रकमको always०% हराउनुहुन्छ।